Isikhethi Samalayisense: Isisetshenziswa Esiku-inthanethi Sokukhetha ILayisense Le-CC Elilungile | Kusuka kuLinux
Isikhethi Samalayisense: Insiza eku-inthanethi yokukhetha ilayisense le-CC elifanele
Ukusizakala ngalokhu ngonyaka we-2021, lo Inhlangano ye-Creative Commons lokhu kusuka Isikhumbuzo seminyaka engu-20, namuhla sizohlola insiza eku-inthanethi ethokozisayo futhi ewusizo kubo, ebizwa "Isikhethi Samalayisense" o Isikhethi Samalayisense.
"Isikhethi Samalayisense" Inhloso yalo enkulu ukwenza lula nokwenza ngcono ukukhethwa okufanele kwefayela le- Amalayisense e-CC ngokwakhiwa kwabantu abathintekayo.
Sesike sakhuluma nakwezinye izikhathi enye insiza eku-inthanethi ilusizo kakhulu Inhlangano ye-Creative Commons. Ngakho-ke, njengenjwayelo sizoshiya ngokushesha ngezansi, isixhumanisi sashiwo okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene lapho sisondela khona, kubizwa Sesha:
"Indlela engcono yokuthola inani elikhulu lokuqukethwe nelayisense yeCopyleft wedwa Injini yokusesha yenhlangano yeCreative Commons. Ngenxa yaleli thuluzi elikhulu kangaka, sizothola inqwaba yezithombe nokunye okuqukethwe okubukelwayo okungenayo ilayisense kumasevisi ahlukahlukene: iGoogle, iFlickr, iBlip.tv, iJamendo, iWikimedia noma iSpinXpress." ¿Ungakusesha kanjani kalula okuqukethwe okunelayisense le-Creative Commons?
Ungakusesha kanjani kalula okuqukethwe okunelayisense le-Creative Commons
1 Isikhethi Samalayisense: Iwebhu ukukhetha ilayisense le-CC elifanele
1.1 Ayini amalayisense e-Creative Commons?
1.1.2 Inhlangano ye-Creative Commons
1.2 Yini okhetha ilayisense futhi isebenza kanjani?
1.2.1 Uhlobo oluzinzile
1.2.2 Uhlobo lwe-beta
1.3 Imininingwane engaphezulu nge-Creative Commons
Isikhethi Samalayisense: Iwebhu ukukhetha ilayisense le-CC elifanele
Ayini amalayisense e-Creative Commons?
Ukuqonda kafushane, yini i- Amalayisense e-Creative Commons, incazelo efanayo enikezwe yi- Inhlangano yomhlaba ye-UNESCO. Okusho okulandelayo:
"Amalayisense e-Creative Commons (CC) ayizinkontileka eziyimodeli ezisebenza ukunikela esidlangalaleni ilungelo lokusebenzisa ushicilelo oluvikelwe yi-copyright. Imikhawulo embalwa eshiwo ilayisense, iba nkulu amathuba okusebenzisa nokusabalalisa okuqukethwe. Amalayisense e-CC avumela noma imuphi umsebenzisi ukulanda, ukukopisha, ukusabalalisa, ukuhumusha, ukusebenzisa kabusha, ukuzivumelanisa nokuthuthukisa okuqukethwe kwakhe mahhala." Amalayisense we-Creative Commons
Inhlangano ye-Creative Commons
Kodwa-ke, kunezincwadi eziningi ezitholakalayo kwi-Intanethi ngazo. Futhi indlela enhle njengokujwayelekile ukuqonda nokufunda, ukubheka i- umthombo osemthethweni kwalokhu okuhlaziyiweyo. Ngakho-ke, inhloso ukufinyelela ifayela le- Isigaba esithi "Amalayisense" kusuka kuwebhusayithi esemthethweni ye- Inhlangano ye-Creative Commons ukuze kuthintwe kalula futhi kufundwe, nobubanzi bokuthi Amalayisense e-CC.
"Onke amalayisense e-Creative Commons anezici ezibalulekile ezifanayo. Ilayisense ngayinye isiza abadali (sibabiza ngabanikezi bamalayisense uma besebenzisa amathuluzi ethu) ukugcina amalungelo abo obunikazi ngenkathi bevumela abanye ukuthi bakopishe, basabalalise futhi basebenzise eminye imisebenzi yabo - okungenani ngendlela engeyona eyezentengiso. Onke amalayisense e-Creative Commons aqinisekisa nokuthi abanikazi bamalayisense bathola isikweletu esifanele imisebenzi yabo.
Amalayisense e-Creative Commons asebenza emhlabeni wonke futhi ahlala inqobo nje uma kusebenza umthetho we-copyright (ngoba asuselwa kuwo). Lezi zimpawu ezijwayelekile zisebenza njengesisekelo lapho abanikeli bamalayisense bangakhetha ukunikeza izimvume eziningi lapho bethatha isinqumo sokuthi bafuna umsebenzi wabo usetshenziswe kanjani."
Yini okhetha ilayisense futhi isebenza kanjani?
Njengoba besishilo ekuqaleni kokushicilelwa, lo mthombo oku-inthanethi we Inhlangano ye-Creative Commons, ihlose ngokuyisisekelo, lula nokwenza ngcono ukukhethwa okufanele kwamaLayisense e-CC ngokwakhiwa kwabantu abathintekayo.
Futhi njengamanje unayo Izinketho ze-2 yokusetshenziswa:
Ine-interface elula ebusweni obubodwa obuvulekile, ekhombisa izinketho ezitholakalayo nemiphumela etholwe ngokukhetha ngakunye.
Ine-interface enembile futhi ehlakaniphile njengesifundo noma umhlahlandlela, okuyisinyathelo ngesinyathelo esivumela umsebenzisi ukuthi afinyelele umgomo wokuthola ilayisense le-CC elifanele kakhulu.
Imininingwane engaphezulu nge-Creative Commons
Ngeminye imininingwane nge Inhlangano ye-Creative Commons, izinsiza zayo eziku-inthanethi namalayisense ayo ungahlola izixhumanisi eziwusizo ezilandelayo:
Iminyaka engama-20 yeCreative Commons
"ICreative Commons yinhlangano engenzi nzuzo yomhlaba wonke eyenza ukuthi ubuhlakani nolwazi lwabiwe futhi lusetshenziswe ngokunikeza amathuluzi wezomthetho wamahhala. Amathuluzi wethu wezomthetho asiza labo abafuna ukukhuthaza ukusetshenziswa kabusha kwemisebenzi yabo ngokubanikela ukuthi bayisebenzise ngaphansi kwemigomo evumayo nejwayelekile; kulabo abafuna ukwenza imisebenzi yokudala ngobuhlakani; nakulabo abafuna ukusizakala ngalesi sifo." Yini i-Creative Commons futhi yenzani?
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana nezinsiza eziku-inthanethi ezithakazelisayo neziwusizo ezibiziwe «Licenser Chooser» o Isikhethi Samalayisense, okuyiwebhusayithi ye I-Creative Commons (CC) futhi inhloso yayo ukwenza lula nokwenza ngcono ukukhethwa okufanele kwe Amalayisense e-CC ngokwakhiwa kwabantu abathintekayo; yiba nentshisekelo nokusetshenziswa okuhle, ngakho konke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Isikhethi Samalayisense: Insiza eku-inthanethi yokukhetha ilayisense le-CC elifanele
I-Steam Deck, ikhonsoli kaValve yokuncintisana ne-switch switch